Twitter ကိုအသုံးပြုရန်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက် ၁၅ ခု Martech Zone
Twitter အသုံးပြုရန်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက် (၁၅) ချက်
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 28, 2009 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2014 Douglas Karr
Twitter ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ဆက်လက်၍ ရုန်းကန်နေရသည်။ မိတ္တူကူးယူပါ Twitterville: New Neighborhoods in New Business တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမည်သို့ရှင်သန်နိုင်ကြောင်း by Israelသရေလအမျိုး၊။ ၎င်းသည်တွစ်တာ၏မွေးဖွားမှုနှင့်တိုးတက်မှုအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြားခံအသစ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အလွန်ကောင်းသောစာအုပ်ဖြစ်သည်
ငါစာအုပ်ဖတ်နေစဉ်, Shel ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီတစ်ခုကတွစ်တာအသုံးပြုလိုသောအကြောင်းပြချက်များစွာဖော်ပြသည်။ ငါသူတို့ထဲကအတော်များများ, အချို့သောအခြားဆွေးနွေးမှုများနှင့်အတူ ... အချို့သောစာရင်းပြုစုဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ကူပွန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများဖြန့်ဝေ Twitter သည်ခွင့်ပြုချက်ရသည့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုဖြန့်ဝေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း Adam အသေးစား စားသောက်ဆိုင်၌ဤမြင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း Mobile Alerts, Twitter, Facebook, Blogging နှင့် Syndication ပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သူ၏ဖောက်သည်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကြီးထွားစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
၀ န်ထမ်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း - အီးမေးလ်ဆာဗာများကိုဆက်သွယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများအတွင်းလူများ၏အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းထက်တွစ်တာသည်ကြီးမားသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါကြောင့်ပဲ ပထမ ဦး ဆုံး Twttr အမည်ဖြင့် Odeo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့တယ် (ကျွန်တော်နှင့်အီးသည် SMS အတွက်စာရိုက်နည်းအတွက်လျော့နည်းသွားသည်!)
ဖောက်သည်တိုင်ကြားချက်များကိုလက်ခံခြင်း - ကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ညစ်ပတ်သောအဝတ်လျှော်မှုများကိုအများပြည်သူရှေ့မှောက်၌ထုတ်ပစ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်အဆက်မပြတ်တိုက်လှန်နေရသည်။ အဆိုပါအမြီးအမောက်စားသုံးသူဖြစ်ပါတယ် ကြယ်ငါးပွင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့မယုံတော့ဘူး။ အများဆုံးရန်လိုသောမြှင့်တင်ရေးနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုဝေဖန်မှုများပုံမှန်အားဖြင့်လာ ပြီးနောက် သူတို့ရဲ့တုန့်ပြန် ... သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှု။ ဖောက်သည်များ၏တိုင်ကြားချက်များကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလက်ခံခြင်းအားဖြင့်အခြားစားသုံးသူသည်သင်မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် အမှန် ဖြစ်ကြသည်။
အလုပ်တစ်ခုရှာခြင်းသို့မဟုတ်တင်ခြင်း - ၀ န်ထမ်းရှာဖွေသူများနှင့်ရှာဖွေသူများသည်တွစ်တာကို အသုံးပြု၍ လိုချင်သောအလုပ်များ၊ ပထဝီဆိုင်ရာရှာဖွေမှုတစ်ခုဖြင့်သင်သည်အလုပ်ရှာရန်သင်မည်မျှနီးကပ်နေသည်ကိုရှာဖွေနိုင်ပြီးသင်၏ရှာဖွေမှုအတွက်အခြားဝေါဟာရများကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်း - ငါ visitors ည့်သည်တစ်ထောင်အောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတွစ်တာဟာဖြစ်လာခဲ့တယ် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှကြီးစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာ။ ဒါကိုဂူဂဲလ်သဘောပေါက်ပြီ သင်၏အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းများကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအဖြေများသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်နောက်လိုက်သူများသည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းတွင်အလုပ်လုပ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဝင်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာ - Compendium တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်၊ တွစ်တာမှကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်သို့ ၀ င်ရောက်လာသော ၀ င်ပေါက်များ၏နံပါတ်နှင့်အရည်အသွေးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းထက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ပိုမိုသတိပြုမိလာသည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကကျွန်ုပ်တို့ကို visitors ည့်သည်များစွာ ၀ င်ရောက်စေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်တွစ်တာ onboard ကိုရယူရန်နှင့်၎င်းတို့၏ feeds များကိုကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အလိုအလျောက်ရယူရန်ဖောက်သည်များအားလုံးဝစတင်ခဲ့သည်။ Hootsuite or twitterfeed.
လူသားစီးပွားရေး - အများပြည်သူနှင့်အနည်းငယ်သာဆက်သွယ်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လူတို့ထိတွေ့ခြင်းသည်စီးပွားရေးအတွက်ကောင်းမွန်ပြီးဖောက်သည်များအားထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်လူ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပေးစွမ်းရန်ရုန်းကန်နေရပြီးအရင်းအမြစ်အငတ်ဘေးကြုံခဲ့ရလျှင်တွစ်တာသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ၎င်းကိုတစ်နေကုန်စောင့်ကြည့်ရန်မလိုအပ်ပါ။ (ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုပါသည်။ အလျင်အမြန်ပြန်ကြားချက်များမှာ - oohs နှင့် aahs များဖြစ်သည်) - သို့သော်အလွယ်တကူပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ avatar တစ်ခုရှိသူ၏တုံ့ပြန်မှုမှာအမြဲတမ်းအေးမြပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတံဆိပ်တပ် - လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ၀ န်ထမ်းများသို့မဟုတ်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်များစွာသောအရာများကို ဦး တည်နိုင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီကိုစတင်ပါ! သင်၏အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပါစေ။ လူအများရှေ့တွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုမည်ဆိုပါကသူတို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မည်သို့ထင်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်များစွာသောလူတို့သည်ယခုအလုပ်ရှာဖွေနေကြသည်။
တွစ်တာရှာဖွေရေး Hashtags နှင့်အတူ Optimization - တွစ်တာတွင်ရှာဖွေမှုများသည် ပို၍ များလာသည်။ သင့်ရဲ့ Tweets ဒါမှမဟုတ် autopost ယန္တရားတွေမှာ hashtags တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချခြင်းဖြင့်ရှာပါ။
ထိရောက်သောကွန်ယက် - အွန်လိုင်းကွန်ရက်သည်အော့ဖ်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုအတွက်ရှေ့ပြေးနိမိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Twitter မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အလားအလာမည်မျှကိုကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲကအချို့သည်လအနည်းငယ်ကြာအော့ဖ်လိုင်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းမပြုမီတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိကျွမ်းခဲ့ကြသော်လည်းအချို့သောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးများသို့ ဦး တည်သွားခဲ့သည်။
ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး - တွစ်တာသည်ဗိုင်းရပ်စ်ရောင်းဝယ်မှုတွင်အန္တိမဖြစ်သည်။ Retweet (RT) သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင်၏သတင်းစကားကို network မှ network သို့ network သို့တွန်းပို့သည်။ အခုစျေးကွက်တွင်ဗိုင်းရပ်စ်နည်းပညာပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသေချာပါ။
ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်း - Shel သည်ကုမ္ပဏီများသည်တွစ်တာကိုပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သို့ထိရောက်စွာအသုံးချခဲ့ကြောင်းဥပမာများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။ အကျိုးကျေးဇူးမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပါအကျိုးရှိသည်။ တွစ်တာတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုသူတို့တစ်နေရာရာရှိဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြခြင်းထက် ပိုမို၍ လူသိများသောကြောင့်
အွန်လိုင်းမှာယူမှု - ကူပွန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများအပြင်အချို့သောရှေးရှေးများသည်အွန်လိုင်းမှဖောက်သည်များကိုမှာယူကြသည်။ Shel ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်းရေးပြီးမင်းမှာထားတာတွေကို Tweet လုပ်ပြီးသွားယူနိုင်ပါတယ်။ အရမ်းအေးတယ်!
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး - တွစ်တာသည်စာလုံးရေ ၁၄၀ စာမြန်နှုန်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောကြောင့်သင်၏ကုမ္ပဏီသည်တွစ်တာနှင့်ချိတ်ဆက်သည့်ရန်လိုသော PR မဟာဗျူဟာရှိခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ဘက်၊ မီဒီယာ၊ ယိုစိမ့်မှုများကိုရှေ့တန်းတင်နိုင်သည်။ သင်ပထမ ဦး ဆုံးကြေငြာချက်လုပ်သောအခါလူများသည်သင့်ထံသို့လာကြသည်။ အရာရာကိုမှန်အောင်လုပ်ဖို့ရိုးရာမီဒီယာဒါမှမဟုတ်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဆီကိုမထားခဲ့ပါနဲ့။ ဆက်သွယ်ရေးကိုညွှန်ကြားဖို့တွစ်တာကိုသုံးပါ။
ဆက်သွယ်မှုသတိပေးချက်များ - သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ပြaနာရှိနေပြီးသင်၏ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာရှိသောဆက်သွယ်မှုများလိုအပ်ပါသလား။ တွစ်တာသည်ဤအရာကိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ Pingdom သည် Twitter Alerts များကို၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့ပေါင်းထည့်လိုက်သည်။ အလွန်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ မှ လွဲ၍ …တွစ်တာကျဆင်းသွားသောအခါသူတို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါ။ 😉သတိပေးချက်တစ်ခုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်ကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသင်၏ဖောက်သည်များအားအသိပေးရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ရှယ်ကသူ၏စာအုပ်များရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များကို ၀ င်ငွေနှင့်တိုက်ရိုက်မဖော်ပြနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်မှန်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့ကိုတိုင်းတာနိုင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်ပေးငွေကိုအသုံးချနိုင်သည်။ Twitter ခေါ်ဆိုမှုအသံပမာဏကိုခြေရာခံပေးသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့်အဖြေများကိုလူသိများလာခြင်းကြောင့်တွစ်တာသည်ပျမ်းမျှခေါ်ဆိုမှုအသံကိုလျှော့ချခြင်းရှိမရှိသိနိုင်ရန် Tweets ကိုတိုင်းတာနိုင်သည်။ # 15 လိုပဲ ... အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကျသွားပြီး Tweet လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် - အဲဒီလူတွေဟာဒီကိစ္စကိုငါအတည်ပြုပြီးပြီဆိုတာသူတို့သိပြီးကတည်းကငါ့ကိုသိစေဖို့ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့သိပ်မခက်တော့ဘူး။
Quark မြှင့်တင်ရေးသည်သင်၏စီးပွားရေးထုတ်ဝေမှုလိုအပ်ချက်များအတွက် Hybrid ဖြေရှင်းချက်ကိုပေးထားသည်
29:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 36
အိုး၊ ဒါက Douglass စာရင်းကြီးပဲ။ "ငါဘာတွေပျောက်နေတာလဲ?" ဒီပို့စ်ကို အဆုံးသတ်ဖို့ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းလို့ ကျွန်တော်ထင်မြင်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးဟာ အဲဒီနေရာမှာပဲ ပါပြီးသားပါ။ ငါဘာတွေ ပျောက်နေလဲ ပြောပြမယ် >> ဒီစာအုပ်က ငါ့စင်ပေါ် မှာ။ ဒီနေ့ တတိယ ပို့စ်ကို ဖော်ပြပြီးဖြစ်လို့ ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်မှာ ဝယ်ဖို့ သေချာပါတယ်။ အချက်အလက်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ – ပေါလု
နိုဝင်ဘာလ 30 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 12:53 နာရီ
လောင်းကစား၊ ပေါလု။ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပါ - စာရင်းထဲထည့်ထားလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ 29 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ 1:49 နာရီ
Douglas က အရမ်းမိုက်တဲ့ ပို့စ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် Twitter နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ချဲ့ထွင်ရန် ခဲယမ်းများကို ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အော်စကာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခဲယမ်းမီးကျောက်တွေ လိုအပ်နေသေးတာ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ မဟုတ်လား ။
ဇန်နဝါရီ 28, 2010 မှာ 10: 25 AM
Business Communication အီးမေးလ်ကနေ။ FYI
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2011 ခုနှစ် ညနေ 7:51 နာရီ
ဤအရာများသည် ကောင်းမွန်သောအချက်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အွန်လိုင်းစစ်တမ်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ လူများသည် ဖောက်သည်အကူအညီကို မကြာခဏခေါ်ဆိုသကဲ့သို့ ၎င်းတို့၏ပြဿနာများကို Twitter နှင့် Facebook မှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်ထံသို့လာကြသည်။ လူမှုကွန်ရက်ကနေတစ်ဆင့် သူတို့နဲ့ ချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ ခံစားရတဲ့အတွက်၊ သူတို့ရဲ့ တိုင်ကြားချက်တွေကို သေချာဂရုစိုက်ရမယ်ဆိုတာ သင်သိပါတယ်။ ဤအရာမှ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြုသဘောဆောင်သော တုံ့ပြန်ချက်များစွာ ရရှိထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းသည် အမှန်တကယ် အသိုင်းအဝိုင်း၏ ခံစားချက်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ယနေ့ခေတ် Twitter တွင်မရှိသော မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို ကြီးမားသောနည်းလမ်းဖြင့် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။